KWEMAKORE akawanda zvaifungidzirwa kuti shiri dzinonzi maarctic tern dzinobhururuka kwemakiromita anenge 35 200 kubva kuArctic (kumusoro kwenyika) kuenda kuAntarctica (kuzasi zasi kwenyika) nekudzokera. Asi ongororo ichangobva kuitwa yakaratidza kuti shiri idzi dzinobhururuka kutopfuura ipapo.
Paanenge achitama, maarctic tern anobhururuka achiita seasiri kunanga kwaari kuenda, sezviri kuratidzwa papikicha
Tumwe tumichina tune huremu hunenge hwetsono tunonzi tumageolocators twakasungirirwa pamakumbo edzimwe shiri dzacho. Tumichina utwu twakaratidza kuti mamwe maarctic tern akabhururuka kweavhareji yemakiromita 90 000 kubva kuArctic kuenda kuAntarctica nekudzoka, uye hakuna mhuka yati yambofamba rwendo rwakareba kudaro. Imwe yeshiri dzacho yakabhururuka kweanenge makiromita 96 000! Nei makiromita acho asiyana nezvaifungidzirwa kare?
Pasinei nekuti dzatangira kubhururukira kupi, shiri idzi dzinobhururuka dzichiita sekuti hadzisi kunanga kwadziri kuenda. Kakawanda padzinopfuura nepamusoro peAtlantic Ocean, dzinobhururuka dzichibhenda-bhenda, sezviri kuratidzwa pamufananidzo. Nei dzichidaro? Nekuti dzinobhururuka dzichitevedza mhepo.
Shiri idzi dzinowanzorarama kwemakore 30 uye paupenyu hwadzo hwese dzinogona kubhururuka kwemakiromita anopfuura mamiriyoni 2,4. Izvi zvakafanana nekuenda kumwedzi nekudzoka ka3 kana kuti ka4! Mumwe muongorori akati: “Zvinoitwa neshiri diki iyi inorema 100g chete zvinokanga mate mukanwa.” Chimwewo ndechekuti sezvo dzichisvika kuAntarctica uye kuArctic panguva yechirimo, dzinokwanisa kuona “chiedza chezuva chakawanda pagore kupfuura zvisikwa zvese,” rinodaro bhuku rinonzi Life on Earth: A Natural History.